XIIQ-DHEERTA AMA JIIX DHEERTA - Awdinle Online
XIIQ-DHEERTA AMA JIIX DHEERTA
October 30, 2019 (AO) -Xiiq-dheerta, oo loona yaqaanno “whooping cough,” waa cudur la is qaadsiiyo oo ay keento bakteeriya. Waa cudur lagaga hortegi karo tallaal, oo aan halis badan ku hayn carruurta tallaalan iyo dadka waawayn, haseyeeshee khatar culus ku noqon kara dhallaanka yaryar.
Waxa jira saddex marxaladood ama weji oo ay marto xiiq-dheertu. Wejiga kowaad (oo ah ilaa toddobaad ama laba toddobaad) waxay u bilaabantaa sidii duriga (hargabka), sanka oo qoyanaada, duuf farabadan, hindhiso, waxoogaa yar oo xummad ah, isla markaana hargabka ayaa sii xumaada. Wejiga labaad wuxuu ka kooban yahay qufac dheer oo aan la xejin Karin, kaasoo marmarka qaarkood qaylo dheer u keeana (yar ahaan dhallaanka) marka uu qofku neefsanayo. Qufacaasi wuxuu keenaa in qofka naqasku qabto, hunqaaco ama wajigiisu noqdo buluug hawada oo ku yaraatay awgeed. Inta u dhaxaysa qufacyada, qofku wuxuu u muuqdaa inuu fiican yahay. Marka qofku qufaca bilaabo wuxuu noqon karaa si aad u xun, isagoo aan waxba cuni Karin,
cabbi Karin ama neefsan karin. Xilliga dhallaanku waxaa ku dhegi kara naqaska oo suuxaan (inay neefsan kari waayaan) ama/iyo inay dhiig rooraan (jirkooda oo buluug u ekaada). Wejiga qufacu wuxuu socon karaa lix ama in ka badan oo toddobaad.
Wejiga u danbeeyaa waa marka astaamaha cudurka si fiican loo arko oo ah toddobaadyo ama bilo.
Waa maxay dawadiisu?
Previous articleEthiopia begins the construction of Ogaden-Djibouti crude oil Pipeline
Next articleXildhibaan cawil xasan oo dacwad laga gudbiyay